उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ : देवेन्द्रप्रताप शाह - arthamandu
गृहपृष्ठ उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ : देवेन्द्रप्रताप शाह
नेपाल बैंक नेपालकै जेठो बैंक हो । हाल मुलुकमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्ये सबैभन्दा पहिले यस बैंकले बैंकिङ कारोबार शुचारु गरेको थियो । नेपाल बैंकको उद्घाटन तत्कालिन राजा त्रिभुवन विरविक्रम शाहदेवबाट वि.सं.१९९४ कार्तिक ३० गतेका दिन गरेका थिए ।
यसैबाट नेपालमा संस्थागत रूपमा बैंकिङ्ग सेवाको शुरुवात भएको थियो । यो बैंक स्थापना हुनु भन्दा पहिलेसम्म सम्पूर्ण मौद्रिक कारोवारहरू निजी डिलर तथा व्यापारिक केन्द्रहरूबाट हुने गर्दथ्यो ।
१२ जना कर्मचारी र एकमात्र कार्यालयबाट नेपाल बैंकको शुरुवात भएको जानकारहरु बताउछन् । अहिले मुलुकमा सञ्चालित २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये एक सवल बैंकको रुपमा यस बैंकलाई लिने गरिन्छ । यो बैंक सरकारी लगानीको बैंक हो ।
यद्यपि, यसमा सरकारका साथै सर्वसाधारणहरुको समेत लगानी रहेको छ । यस बैंकले भर्खरै सर्वसाधारणका लागि एफपीओ जारी गरेको छ । एफपीओ जारी पश्चात बैंकले पूँजी थप सवल हुने देखिएको छ । प्रस्तुत छ, यस बैंकको पछिल्ला गतिविधि तथा भावी रणनीतिका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भर्खरै एफपीओ निष्काशन गर्नु भयो तर यसमा आकर्षण अलि कम देखियो नि, यसको खास कारण के होला ?
अहिले सयम नै यस्तै छ । नेपाल बैंकको एफपीओमा मात्रै नभएर अन्य संस्थाहरुको एफपीओको पनि आकर्षण त्यति राम्रो देखिएको छैन । त्यो मैले भनिरहनु नपर्ला । तपाईहरुले पनि सबै बुझिरहनु भएकै छ । फेरी एफपीओ बिक्री गर्ने म्याद नै सकिइसकिएको छ । आधाभन्दा बढी त बिक्रि भइसक्यो अब बाँकी पनि अर्को माध्यमबाट बिक्रि भइहाल्छ । मार्केटमा जस्तो छ त्यसको असर हामीलाई पनि परेको हो । हाम्रो एफपीओ बिक्न नसकेको भन्न चाहिँ मिल्दैन ।
नेपाल बैंकले राम्रै बोनश शेयर दिन सक्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि होइन ?
नेपाल बैंकले बोनश दिन नसक्ने होइन अवश्य दिन्छ । तर कुरा के हो भने हामीले यति बोनश दिन्छौ भनेर अहिले म भन्न सक्दिन । बोनश शेयर दिने पनि प्रावधान छ । त्यो प्रावधान अनुसार हामीले बोनश शेयर दिन्छौं । बोनश दिने निर्णय नै साधारणसभाले गर्ने हो । अब हाम्रो साधारणसभाले के निर्णय गर्छ सोहि अनुसार हुन्छ ।
बोनशपछि तपाईहरुको पूँजीको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
हामीले आफूलाई पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन प्रिमियम मूल्यमा उक्त एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओबाट बैंकलाई ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । जसमध्ये १ अर्ब ७६ करोड चुक्ता पूँजीमा जान्छ । जेहास नेपाल बैंक पूँजीमा पनि मजबुत बन्दै जानेछ ।
शाखा विस्तारको योजना कस्तो छ, तपाईहरुको भागमा परेका स्थानीय तहहरुमा शाखा विस्तार गरिसक्नु भयो ?
हामी विस्तार गर्छौ भनेका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा शाखा विस्तार गरीसकेका छौं । अब केहि स्थानीय तहहरुमा शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेका छन् ति स्थानीय तहमा पनि हामीले चाडै शाखा विस्तार गर्नेर्छौ । हालसम्म हामीले १ सय ३६ वटा शाखामार्फत बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छौं ।
हामीले शाखा विस्तार प्राथमिकतामा राखेका छौं । सबै स्थानीय तहहरुमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने राष्ट्र बैंकको योजनालाई सघाउँदै थप शाखा विस्तार हामीले गर्नेछौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुले हरेक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ, तपाईहरुको प्रदेश कार्यालय खोल्ने योजना के छ ?
राष्ट्र बैंकले प्रदेशस्तरमा प्रदेश कार्यालय खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले ४ वटा प्रदेशहरुमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिसकेका थियौ । यतिबेला राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरिसकेको छ, अब हामी तयारी शुरु भइसकेका ४ वटा प्रदेश र बाँकी ३ वटा प्रदेशमा समेत चाडै प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नेछौं ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि धेरैले अब व्याजदर घट्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, अहिले व्याजदरको अवस्था के छ ?
मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर कम गराएपछि व्याजदर घट्ने कुरा प्रष्टिएको हो । मेरो विचारमा विस्तारै व्याजदर कम हुँदै जानेछ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नै कृषि कर्जालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने तपाईहरुको कस्तो रणनीति छ ?
हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं र आगामी दिनमा अझ यस क्षेत्रको कर्जा बढाउदै लैजानेछौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी पछि हट्दैनौ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोचाईं हो ।
अन्तमा, नेपाल बैंकको भावी योजनाका बारेमा बताइदिनोस् न
हामी सरकारी नीति अनुसार काम गर्दै जानेछौ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन, मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुलाई फलो गर्दै सोही अनुसार हामी अघि बढ्नेछौं । विजनेशलाई बढाउदै जाने, स्मार्ट शाखा सञ्जालहरु विस्तार गर्ने लगायतका हाम्रा योजनाहरु रहेका छन् । मध्यान्हरा. दैनिकमा प्रकाशति
पछिल्लाे - मर्जरका लागि क्रश होल्डिङ बारे सोचाैं : सीईओ भट्टराई
अघिल्लाे - मौद्रिक नीतिमा विकास बैंक